အခါမဲ့ ရွာသွန်းခဲ့သည့် မိုးကြောင့် ကြက်သွန် စိုက်ပျိုးချိန် နောက်ကျ၍ အလုပ်သမား ခက်ခဲမှုမျာ?? - Yangon Media Group
အခါမဲ့ ရွာသွန်းခဲ့သည့် မိုးကြောင့် ကြက်သွန် စိုက်ပျိုးချိန် နောက်ကျ၍ အလုပ်သမား ခက်ခဲမှုမျာ??
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအများစုတွင် အချိန်အခါမဲ့ ရွာသွန်းခဲ့သည့်မိုးကြောင့် ကြက်သွန်စိုက်တောင်သူများ အလုပ်သမားငှားရမ်းမှု အခက်အခဲနှင့် တွေ့ကြုံနေရသည်ဟု မုံရွာမြို့နယ် သမန္တာကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် တောင်သူ ဦးဝင်းမြို့ ဦးက ပြောသည်။ ”ပုံမှန်ဆို နတ်တော်လက စစိုက်ရတာလေ။ အခု ပြာသိုလထဲရောက်မှ စိုက်ရတော့ အလုပ်သမား ရှာရခက်လာတာပေါ့။ ဘာကြောင့်ဆို အချိန်အခါနှောင်းမှ မိုးက တအားရွာချလိုက်တာ။ မိုးပြတ်တာနဲ့ အားလုံး တစ်ပြိုင်နက်တည်း စိုက်ကြတော့ အလုပ်သမား လုရှာနေရတာပေါ့ဗျာ။ သူစိုက်ချင် ကိုယ်စိုက်ချင်ဆိုတော့ ကြက်သွန်စိုက်အလုပ်သမားကို မျှသုံးနေရတာ။ ပုံမှန်ဆို တစ်ဧကကို လူ ၃ဝ လောက်နဲ့ စိုက်ကြရမယ့်ဟာကို ငါးယောက်၊ ခြောက်ယောက်လောက်နဲ့ စိုက်နေရတာ”ဟု ¤င်းက ပြောသည်။
ယမန်နှစ်ရာသီက ကြက်သွန်ဈေးနှုန်း မြင့်မားခဲ့သည့်အတွက် ဒီနှစ်တွင် ကြက်သွန် စိုက်တောင်သူဦးရေ တိုးပွားလာကြောင်းနှင့် မုံရွာဒေသ၏ ပင်မထွက်ကုန်ဖြစ်သည့် ပဲနှမ်း ဈေးနှုန်း အဆမတန် ကျဆင်းခဲ့သည့်အတွက် ပဲစိုက်တောင်သူအချို့ ကြက်သွန်ဘက်သို့ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးလာသည်ဟုလည်း တောင်သူအချို့က ဆိုသည်။ ”မနှစ်က ကြက်သွန်တစ်ပိဿာ သုံးထောင်ကျော်သွားတာရော။ ပဲနှမ်းဈေးနှုန်း ကျဆင်းတာရောပါတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကြက်သွန်ဘက်ကို ပိုမိုအားထားစိုက်ကြတာ။ အချို့ဆို မြေငှားပြီးတော့တောင် စိုက်ကြတာ”ဟု ဦးဝင်းမြို့ဦးက ပြောသည်။ ယခုနှစ်ရာသီ ကြက်သွန်စိုက်ပျိုးသူ များပြားလာကာ ယာခင်းအပိုင်မဟုတ်သူများမှလည်း ငှားရမ်းစိုက်ပျိုးမှုများ ပိုမိုများပြားလာသည်ဟုသိရသည်။ ထိုသို့သောအကြောင်း အခြင်းအရာများကြောင့် ကြက်သွန်စိုက်အလုပ်သမား လုခေါ်နေရတာလည်းပါသည်ဟုဆိုသည်။ ”အလုပ်သမားငှားရတာကျပ်တာပေါ့ဗျာ။ သူတို့ဆန္ဒလိုက်လျောနေရတာပေါ့။ နေ့စားဆို အရင်က သုံးထောင်လောက်ရှိတာကနေ အခုဆို လေးထောင့်ငါးရာလောက် ပေးငှားနေရတာဗျ။ မုံရွာနယ်က အလုပ်သမားတင်မဟုတ်ဘူး။ အရာတော်မြို့နယ်ထဲက နောင်ကြီးအိုင်နားတစ်ဝိုက်က အလုပ်သမားတွေပါ သွားခေါ်ရတာတွေလဲရှိတာပေါ့”ဟု မြေနဲကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် ကြက်သွန်စိုက်တောင်သူ ဦးအောင်ထူးက ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကြက်သွန်စိုက်ပျိုးမှုကို မိုးတွင်းတွင် တစ်ကြိမ်နှင့် ဆောင်းတွင်းတွင်တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် စိုက်ပျိုးကြသည်။ မိုးတွင်းတွင်စိုက်ပျိုးသည့် ကြက်သွန်သည် ကြာရှည်အထားမခံသလို ဆောင်းကြက်သွန်လောက် ဈေးမရကြောင်းလည်းသိရသည်။ ယခုနှစ်ရာသီ ကြက်သွန်ဈေးနှုန်း မြင့်မားမှုကြောင့် ကြက်သွန်မျိုးစေ့ဈေးနှုန်းပါ အဆမတန် ပေးဝယ်ခဲ့ရသည်။ ”ကြက်သွန်မျိုးစေ့ တစ်ပြည်ကို တစ်သိန်းနှုန်းအထိ ဈေးပေါက်သွားသေးတယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ အဲဒီဈေး မဖြစ်ဖူးဘူး။ နှစ်တိုင်း ပုံမှန် တစ်ပြည်သုံးသောင်းပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတာ”ဟု ဦးဝင်းမြို့ဦးက ပြောသည်။ ယခုနှစ်ပိုင်းတွင် မြန်မာ့ကြက်သွန်ဈေးနှုန်း မြင့်မားလာသဖြင့် တရုတ်ကြက်သွန်များလည်း ဈေးနှုန်း အဆမတန် ချိုသာစွာဖြင့် ဝင်ရောက်မှုများရှိလာကြောင်းကိုလည်း ကြက်သွန်အရောင်းအဝယ်ပွဲရုံများထံမှသိရသည်။